Petition · Don't Believe The Bullshit! of A Shameless Liar · Change.org
Don't Believe The Bullshit! of A Shameless Liar
Citizens of Myanmar started this petition to 참여연대 국제연대위원회 and
A Statement of Condemnation for Inviting Maung Zarni to Make Speech
We, the undersigned individuals/organizations, strongly condemn to blatantly invitedahate-monger Maung Zarni for "Rohingya" to makeaspeech, in disregard of the strong opposition from Myanmar society. We express our indignation and condemnation to such move.
Maung Zarni isawell-connected to military leaders and was in close ties withadefendant Gen. Khin Nyunt, the junta’s prime minister and Military Intelligence chief until his ouster inapurge in 2014.
The Myanmar’s army has continued committing gross human rights violations, unlawful detention of civilians and extra-judicial killings. Although human rights organizations and activists have reiteratively condemned such fascist-acts, he did not criticize openly to Myanmar’s army before 2015 election.
He is well-known as “a mercenary mouth” in our society. He recently launchedacampaign “Call me Rohingya” which mainly sponsored by Organization of Islamic Cooperation (OIC).
As you know, the term “Rohingya” has become one of the most controversial words in Myanmar politics today. The government doesn’t recognize them as one of the country’s official ethnic minorities. Muslim communities scattered across the country have existed for centuries, generally living peacefully among their Buddhist neighbors.
Rohingya issue had become not onlyahot issue in the international political community, but alsoacrowd-pleasing issue that can generate funds. So, it is interfering effort without fully understanding the ethnic groups and other situations of our country.
Do you know, most of declaration and news lack balance and fairness, and fails to denounce the brutal attacks of the terrorist group, the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) which triggered the humanitarian situation unfolding today.
The Government condemned all human rights violations and unlawful violence. Moreover, the government is committed to restoration of peace, stability and rule of law throughout the State.
Myanmar categorically rejects the irresponsible labelling of “ethnic cleansing” or “State backed violence” to describe events in Rakhine State. More than 50% of the Muslim community, which representsamajority in Maungdaw Region, have remained in their villages.
Moreover, Myanmar government is working hard to enhance existing relations with Bangladesh.
We would like to ask our Korea friends who understand and sympathize with, both our aspirations and our problems, to join us and don’t waste time with gossips.
As you know, our country isayoung and fragile democracy facing many problems, but we have to cope with them all at the same time. So, we would like you to join us inapositive and constructive way to find new paths towards peace and stability and towards harmony.
Actually, Maung Zarni isa‘hate-monger.’ By attacking each other, either with words, or with weapons, or even with emotions, will not help and go forward. We believe that hate and fear are the main scourges of our world.
What we want to say is that objectively, Maung Zarni will be educated man. Nonetheless, culturally speaking, his selection to beaspeaker is inappropriate in suchasituation.
Endorsed by: Citizens of Myanmar
마웅 자니의 실체를 알리고 그의 한국 방문을 반대하는 성명서
10월 22일 한국을 방문해 ‘로힝야 이야기’ 라는 제목으로 강연이 예정돼 있는 ‘마웅 자니’에 대해 한국 인권단체들에게 그의 실체를 알리고자 합니다.
지난 오랜 시간동안 우리 재한 미얀마인들과 손잡고 미얀마의 반독재 민주화운동에 힘써주신 한국의 시민단체들은 우리의 친구이자 동지입니다. 그런 시민단체들이, 미얀마 전 국민으로부터 외면 받는 자신의 사익만 추구하는 ‘마웅 자니’의 강연을 연다는 소식에 우리 재한 미얀마인들은 매우 충격을 받았습니다. 사람들의 주의를 끌기 위한 ‘마웅 자니’의 과장되고 자극적 주장과 일방적이기만 한 견해에, 한국의 시민단체들이로힝야를 비롯한 미얀마내의 인권문제에 대해 혹여나 잘 못 생각하게 될까 두려워 우리가 사실을 알려야 한다고 생각했습니다.
그리고 정확한 사실을 바탕으로 한 고민만이 현재 미얀마와 로힝야의 인권문제를 해결 하는데 올바른 도움을 줄 것이라고 생각합니다.
미얀마 라카인주 남쪽의 정치 및 인종 문제는 백 여 년 전부터 시작되었고, 쉽게 해결하기에는 민감한 부분들이 많습니다. 이 문제는 인권뿐만 아니라 경제, 사회, 정치 및 국가 주권과 국토 문제까지 깊이 연관되어 있는 미얀마의 국가적 골칫거리 중 하나 입니다. 그러므로 이 문제의 해결을 돕고자 한다면 미얀마의 역사와 지리, 민족구성과관습은 물론, 현 주민들의 삶과 국내·외 역학관계 등을 정확히 고민해 봐야 할 필요가 있습니다. 현재는 미얀마와 방글라데시 정부 간에 협약이 체결되어 있으며, 협약대로 피난민들의 정착을 추진하고 있습니다. 또한 UN기관들과 협력하여 인도주의적 지원을 실천하고 있고, 아세안국가들뿐만 아니라 다른 독립적인 기관들과 협력하여 반인권 행위 수사 및 처벌, 보호 작업 등을 추진 중에 있습니다. 이와 같은 최신 정보 등에 대해서도 관심을 가져야 합니다.
다양한 민족이 더불어 사는 미얀마는 천 여 년동안 이른바 인종청소 또는 민족 간 전쟁이 없었습니다. 오늘날까지 이어져 온 내전은 정치적 이유로 일어난 무장행위이며, 결코 정부 또는 한 민족이 다른 특정 민족을 위협하거나 몰살시키려는 것이 아님을 분명히 알아두어야 합니다. 최근에 일어난 소요사태도 아라칸로힝야구원군 (Arakan Rohingya Salvation Army - ARSA)이라는 극단주의자들의 테러로 시작되었음을 기억해야 합니다. 때문에 미얀마인들은 미얀마 정부가 로힝야를 대상으로 인종청소를 자행한다는 외부의 비난을 적극 부정하고 있습니다.
사람들의 호기심을 끌기위해 과장되고 자극적 주장만 펼치는 마웅 자니는 미얀마 사람들이 외면하는, 사익만 추구하는 사람입니다. 만달레이 지역 출신인 그는 8888민주화 운동 당시 어떠한 역할도 하지 않은 채, 미국에서 유학생활을 했을 뿐입니다. 한편 1995년 미국내 단체들에서 지원된 자금으로 자유버마연합 (Free Burma Coalition – FBC)을 공동 설립하여 미국정부의 정책대로 미얀마의 경제제재를 진행했습니다.
또한 마웅 자니는 2002년부터 2006년까지 당시 미얀마 국정원장을 지낸 군부 내 삼인자 킨뉸 장군과, 민쉐 장군과 비밀리에 연결되어 재외 민주화운동을 중단시키려고 했습니다. 당시 그는 해외 언론을 통해 수치 여사와 민주민족연맹(NLD)을 미얀마 정치에서 소멸시키기 위한 설득과 공격을 서슴지 않았으며 군부 독재 정책의 정당화를 위한글을 쓰고 연설하는 데 힘썼습니다. 그때부터 미얀마 사람들은 마웅 자니를 군부 독재정권을 옹호하는 배신자로 여기게 되었습니다.
2010년 미얀마 총선 후 정치개혁이 시작되자 마웅 자니는 이슬람 협력기구 (Organisation of Islamic Cooperation – OIC)의 지원으로 로힝야 문제에 나서게 되었습니다. 로힝야라는 명칭에 대한 부분조차 논의되지 않은 상황에서 그가 주도해 ‘Call me Rohinhya’ 운동을 확산시켰습니다. “로힝야에 대한 인종청소가 발생했고, 그들에게 무조건 시민권을 부여해야 하며, 사건과 관련된 군부 인사들은 국제형사재판소의 재판을 받아야 한다” 는 주장을 펼치는 등, 사실을 왜곡하고 과장시켜 국제 사회에 알려왔습니다. 그의 이런 행동은 인권옹호를 위해서가 아닌 오직 자신의 이익을 위한 것이었습니다.
마웅 자니의 지난 25년간의 삶은 그가 돈만 받으면 일을 가리지 않는 용병이라는 점을 보여주고 있습니다. 경제적 이득만 누릴 수 있다면 소신을 뒤집고 반인권적인 군부에 게도 무릎 꿇을 수 있는 사람입니다. 그는 민주화운동에 나선 미얀마 국민들에 반하여 왜곡된 역사를 만드는 것을 망설이지 않은 사람입니다. 특히 로힝야 인권에 대해 목소리를 높이던 그는 정작 미얀마 내전 관련 인권문제나 ‘디페인(Depayin)학살’과 같은 반인권 사건에 대해서는 외면하고 있습니다. 마웅 자니는 인권에 대한 소신이 없으며 돈만 아는 용병에 불과합니다.
지금 한국의 인권단체들은 미얀마 라카인주 남쪽에서 발생한 로힝야 또는 뱅갈리 사태에 관심이 많으며, 이에 대한 마웅 자니의 강연을 기대하고 있는 것으로 알고 있습니다. 여러분이 이 사태에 대해 진정 염려하는 마음으로 관심을 가지고 있다면 좀 더 신뢰할 수 있는 전문가를 초청하기를 권해 드립니다.
우리 미얀마 사람들은 사익만 추구하는 용병 ‘마웅 자니‘의 강연을 절대 반대합니다.
우리의 벗인 한국 시민단체 여러분이 우리의 입장을 잘 이해해 주기를 희망합니다. 미얀마 연방국가의 설립, 민주화의 정착, 인권을 중시하는 사회공동체를 발전시키기 위해 옳은 방법으로 정직한 도움을 주십사 정중히 부탁드립니다.
본 성명서에 동의하며 서명합니다.
ကိုရီးယား အဖွဲ့အစည်းများကို မောင်ဇာနည်အကြောင်း အသိပေးခြင်းနှင့် ၎င်းအား ကန့်ကွက်ကြောင်း သဘောထားကြေညာချက်
မကြာမီကာလအတွင်း ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ လာရောက်၍ ကိုရီးယား လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများအား "ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောမည့် မောင်ဇာနည် ဆိုသူ၏ ၎င်းကိုယ်တိုင် ဖုံးကွယ်ထားသော ၎င်း၏ အကြောင်းရင်း အမှန်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဆွေ ကိုရီးယားအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ အသိပေးလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုရီးယားနေ မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ လက်တွဲလျက် စစ်အာဏာရှင်စနစ် တိုက်ဖျက်ရေး၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးတို့အတွက် အတူတကွ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော မိတ်ဆွေ ကိုရီးယားအဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာတမျိုးသားလုံးက ပစ်ပယ်ထားသူတဦး၏ တခဏ ဟောပြောချက်ကို အမှန်ဟု ထင်မြင်ကာ ပကတိ အရှိတရားနှင့် ဝေးကွာသွားလျက် နောင်တရစရာများ ဖြစ်မလာစေရန် မိတ်ဆွေတို့အား ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီသင့်သည်ဟု ယူဆသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ သဘောထားဆန္ဒကို ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြ အသိပေးခြင်းအားဖြင့် မိတ်ဆွေ တို့သည် တဖက်စောင်းနင်း စကားလုံးများ၏ အချုပ်အနှောင်မှ ရှောင်ရှားနိုင်ကာ မိတ်ဆွေတို့ စိုးရိမ်နေသည့် မြန်မာပြည်ရှိ လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စများတွင် မှန်ကန် ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကူညီခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးနှင့် လူမျိုးရေး အခြေအနေများသည် ရာစုနှစ်ချီကြာ ရှုပ်ထွေးခဲ့ပြီး၊ အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းဖို့ခက်သည့် သိမ်မွေ့သော ပြဿနာများ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရေးသည် လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ တခုတည်းသာ မဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုများအထိ နက်ရှိုင်းစွာ အကျိုးသက်ရောက်နေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားရေး အကြပ်အတည်းတခု ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤကိစ္စကို ကူညီဆောင်ရွက်လိုသူတိုင်းသည် မြန်မာ့သမိုင်း၊ ပထဝီအနေအထား၊ လူမျိုးစုများနှင့် ယင်းတို့၏ ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ဒေသခံများ၏ ဘဝနှင့် ခံစားမှုများ၊ ပြင်ပဖိအားများ အားလုံးကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာသိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယခုအခါ မြန်မာအစိုးရသည် အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနှင့် နှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုထားပြီး၊ စာချုပ်ပါအတိုင်း နေရပ်စွန့်ခွာရသူများ ပြန်လည် အခြေချရေးကို ဆောင်ရွက်နေသည်။ ကုလသမဂ္ဂနှင့် ပူးတွဲ၍ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသည်။ အာဆီယံနှင့် အခြား လွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲကာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဖော်ထုတ်ရေး၊ ရှိခဲ့ပါက အရေးယူရေး၊ ကာကွယ်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ ဤအချက်များကိုလည်း မျက်ခြေမပြတ် မှတ်သားသိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျိုးပေါင်းစုံ စုပေါင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည့် နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်သက်တမ်း အတွင်း လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု သို့မဟုတ် လူမျိုးချင်းစစ်ပွဲ ဟူ၍ တကြိမ်တခါမျှ မရှိခဲ့ဘူးပေ။ ယနေ့တိုင် အဆုံးမသတ်သေးသည့် ပြည်တွင်းစစ်သည် နိုင်ငံရေးအရ လက်နက်ကိုင်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး၊ လူမျိုးတမျိုးအပေါ် အခြားလူမျိုးတမျိုးက ရန်ပြုခြင်း၊ အစိုးရ သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က သုတ်သင်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ထားသင့်ပါသည်။ လတ်တလော အဖြစ်အပျက်များသည် Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) အစွန်းရောက်များ၏ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများမှ အစပြုခဲ့သည်ကိုလည်း မမေ့အပ်သင့်ပေ။ ထို့ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် မြန်မာအစိုးရက လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်သည်ဟု ပြင်ပမှ စွပ်စွဲချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးက လုံးဝလက်မခံဘဲ အပြင်းအထန် ငြင်းဆန်နေရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤသို့ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးက ငြင်းပယ်ထားသော လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ဟူသည့်အချက်ကို သက်သေအခိုင်အလုံ မရှိဘဲ၊ စွပ်စွဲ ဟောပြောနေသည့် “မောင်ဇာနည်” ဆိုသူမှာ မြန်မာအားလုံးက ပစ်ပယ်ထားသည့် ကိုယ်ကျိုးရှာသမား တဦးသာ ဖြစ်သည်။ မန္တလေး ဇာတိဖြစ်သူ မောင်ဇာနည်သည် ၁၉၈၈ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးတွင် မည်သည့်နေရာကမျှ ပါဝင်ခဲ့ခြင်း မရှိဘဲ၊ ထိုအချိန်က အမေရိကန်တွင် အလုပ်တဖက်နှင့် ကျောင်းတက်နေသူ တဦးသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် အဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးကမ်းသော ရန်ပုံငွေဖြင့် Free Burma Coalition (FBC) ကို ပူးတွဲဖွဲ့စည်းပြီး၊ ထိုအချိန်က အမေရိကန်အစိုးရ၏ ပေါ်လစီအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ အထိ မြန်မာ စစ်ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး စစ်အာဏာရှင် နံပတ် ၃ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်၊ ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေ တို့နှင့် လျှို့ဝှက် ချိတ်ဆက်ကာ၊ ထောက်လှမ်းရေးက စီစဉ်ပေးသော အထောက်အပံ့ဖြင့် ပြည်ပဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုများ ရပ်ဆိုင်းသွားအောင် တိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက်ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ပြည်ပမီဒီယာများမှတဆင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှ ဖယ်ထုတ်ရန် တိုက်ခိုက် လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ စစ်အာဏာရှင် လမ်းစဉ်ကို ထောက်ခံရန် စည်းရုံးခြင်းတို့ကို မြန်မာ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ကြိမ်ဖန်များစွာ ဟောပြော ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မြန်မာအသိုက်အဝန်းက မောင်ဇာနည်အား စစ်အာဏာရှင်ကို အားပေးသော ပြည်သူ့သစ္စာဖောက် အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီး နိုင်ငံရေးစနစ် ပြောင်းလဲသည့်အချိန်မှ အစပြု၍ မောင်ဇာနည်သည် Organization of Islamic Cooperation (OIC) မှ ထောက်ပံ့သော ရန်ပုံငွေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာအရေး ဆောင်ရွက်သူ ဖြစ်လာသည်။ ရိုဟင်ဂျာဟူသော အမည်သည် အငြင်းပွားနေဆဲဖြစ်၍ ယတိပြတ် မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးကြောင်း ၎င်းလုပ်သည့် "Call Me Rohingya" လှုပ်ရှားမှုက သက်သေပင် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အမည်တခုကိုပင် ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ အတည်မပြုနိုင်သေးသည့် အခြေအနေတွင် ၎င်းလူမျိုးများကို ခြွင်းချက်မရှိ နိုင်ငံသားပေးရမည်ဟု တောင်းဆိုခြင်း၊ သက်သေ အထောက်အထား မရှိဘဲ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုဟု စွပ်စွဲခြင်း၊ ကျူးလွန်သည့် စစ်ခေါင်းဆောင်များကို International Criminal Court (ICC) တင်ရန် တောင်းဆိုခြင်း၊ နိုင်ငံတကာသို့ လိုက်လံစည်းရုံးခြင်း စသည်တို့မှာ ပကတိ အရှိတရားနှင့် လုံးဝ ဆန့်ကျင်နေပါသည်။ မောင်ဇာနည်သည် ထိုသို့ မမှန်မကန် ဟောပြောလုပ်ဆောင်နေခြင်းမှာ ၎င်း၏ ကိုယ်ကျိုးသက်သက်အတွက် မှတပါး အခြားမရှိဟု ဆိုရပါလိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်အတွင်း မောင်ဇာနည်သည် ငွေကြေးရလျင် ဘာမဆိုလုပ်သည့် ကြေးစားလှုပ်ရှားသူတဦး အဖြစ်သာ ရပ်တည်ခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏ သမိုင်းက ပြဆိုနေသည်။ ငွေရလျှင် မူဝါဒကို ပြောင်းပြန်မှောက်ခုံ လုပ်တတ်သလို၊ လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးမထားသော စစ်အာဏာရှင်ထံ အညံ့ခံရန်လည်း ဝန်မလေးခဲ့ပေ။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တောင်းဆိုသည့် ပြည်သူကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သလို သမိုင်းကို လိမ်လည်ရန်လည်း ဝန်မလေးခဲ့ပေ။ အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေသည်ဟု ယခုအခါ ဟစ်အော်နေသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတလွှား ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ဖြစ်ရသည့် လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာများနှင့် ဒီပဲယင်းသတ်ဖြတ်မှု (Depayin Massacre) ကဲ့သို့သော လူ့အခွင့်အရေး ကျူးလွန်မှုများအတွက် မောင်ဇာနည်သည် တခွန်းမျှ မဟခဲ့ဘူးပေ။ ထို့ကြောင့် မောင်ဇာနည်သည် လူ့အခွင့်အရေးကို ယုံကြည်သူတဦး မဟုတ်ဘဲ "ကြေးစားပါးစပ်ပေါက်" တခုသာ ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းရှိ ရိုဟင်ဂျာ ခေါ် ဘင်္ဂလီလူမျိုးများ၏ အဖြစ်အပျက် အခြေအနေကို အထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပြီး၊ ထိုအကြောင်းအရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မောင်ဇာနည် ဆိုသူ၏ ဟောပြောချက်ကို နားထောင်ရန် စိတ်စောနေကြ ကြောင်း သိရပါသည်။ မိတ်ဆွေတို့ အနေနှင့် ထိုအကြောင်းအရာကို အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားပါက အကြောင်းအရာပြဿနာကိုလည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လေ့လာသိရှိထားပြီး လူအများလေးစားသည့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော ပညာရှင် တဦးဦး သို့မဟုတ် အများကို ဖိတ်ခေါ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိင်ငံသားများကမူ ကြေးစားပါးစပ် တခုဖြစ်သော မောင်ဇာနည်၏ ဟောပြောမှုကို ကန့်ကွက် ရှုတ်ချကြောင်း တိတိလင်းလင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ကိုရီးယားမိတ်ဆွေများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘောထားကို ကောင်းစွာ နားလည်သိမြင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီစနစ် ခိုင်မာရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးကို တန်ဖိုးထားသည့် လူမှုအသိုက်အဝန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့တွင် မှန်ကန်ထိရောက်သော နည်းနာများဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန် လေးနက်စွာ ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်။
၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၁၀
ဤသဘောထားကြေညာချက်ကို ထောက်ခံကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။
Please share my name and email address with Citizens of Myanmar, so that I can receive updates on this campaign and others.